Izigqeba ezili-10 ezimbi
Wonke umntu uyazi ukuphula umthetho ngumsebenzi osisidenge kodwa ulwaphulo-mthetho luninzi kunokuba lube lukhuni kunezinye. Khangela ukuba zeziphi izigebengu ezenzileyo ukuze zithole indawo kwilishumi eziphezulu ezilishumi ezigqwetha. Enye into enokuthiwa ngolu hlobo lwabaphuli mthetho kukuba bayazi ukuba bangayifumana njani ingcamango embi!
Ubusi, Baye bahlutha Izinja!
Waldo Soroa. Mugshot
EFlorida, iqela lamakhwenkwe atshwankqisayo lathi laphuka kwikhaya kwaye ithatha izinto ezininzi kuquka i-rest remains of father's victim, kunye neenja ezimbini.
Ngokombiko wamapolisa, abafana beva ukunambitha nokutshiza i-cocaine, bahlala becinga ukuba yi-cocaine baze bafunde ngephutha labo emva kokubona ingxelo yeendaba.
Amapolisa abanjelwe uWaldo Soroa (ufanelwe), 19, uJoseph Diaz Marrero, 19, uMatrix Andaluz, 18 kunye no-17 ubudala abaneminyaka eli-17 ubudala.
Ekugqibeleni wabika umlotha womntu kwaye enye yezinja ifunyenwe.
Intolongo yokuShushumbisa i-Pain Can Be Pain
Earl Lee Vogt. Mugshot
Ngomhla ka-Matshi 2011, u-Earl Lee Vogt wagwetywa waza wathumela ngqo entolongweni iminyaka ecishe ibe yine kwi- narcotics conviction . Kungekudala emva kokuvalelwa, izinto ezahlukahlukeneyo ezingekho mthethweni zafunyanwa esitokisini sakhe.
Lake County, Ca. Amagosa olwaphulo avule i-cell phone ye-Kyocera, umdlali we-Mp3, i-earbud headphone, ucuba, inambuzane kunye ne-$ 140 ngemali. Xa ebuzwa ukuba wayekwazi njani ukufumana zonke izinto entolongweni yakhe, uVogt wathi ufumene inambuzane esuka kwelinye ibanjwa ngokuthengisa omnye umdlali we-Mp3 kwaye wafihla ezinye izinto kwi-rectum yakhe.
I-Vogt yahlawuliswa ngokuthungisa into elawulwayo kunye nokugcinwa okungagunyazisiweyo kwisixhobo soqhagamshelwano esingenazintambo.
Imbono Ayilula xa Uxutywe ngamatye
UWayne Cokayne. Mugshot
UKevin Lee Cokayne ubanjwe yi-Fairfax County, amaphoyisa aseVirginia ngokusolakala ukuba asebenzisa iziyobisi emva kokuba athole inambuzane ngaphakathi kwendlu.
Ngokombiko, igosa eliphambene nokufuna i-cocaine liye lahlala eCocyyne kwaye lacela ukuba afune ukukhangela ikhaya lakhe.
UChoyyne, onomfanekiso webhola eyi-8 kwiphepha lakhe le-Facebook, watshela amapolisa ukuba wayeneeyunithi ezilishumi ezisixhenxe zokhula, okwakungekho ukungahambi kakuhle kunye nenkunkuma yenkxaso yexesha. Oku kwabangela ukuba igosa lifumane imvume yokufuna uphando kwaye xa amapolisa abuya afumana inambuzane eyaneleyo yokubiza uCokayne ngokuhambisa.
Umzamo wokubaleka ugalela kwiHlt
Ibali likaRoy noJessica Fritts liqala xa bobabini babesentolongweni baze batshintshe iileta emva kokudibanisa kwiwebhusayithi yepen-pal. Ekugqibeleni ekukholelweni komtshato.
Xa bephuma entolongweni, isibini sothando sagqiba ekubeni sifuna ukuya eNevada, kodwa babengenayo indlela yokuthutha. Baye baqubela ukukhwela kwindoda abaye bazama ukuyibulala ngokumtshiza amaxesha amaninzi baze bamshiye ecaleni kwendlela, beba intshontsho yakhe.
Amapolisa ase-Utah abonayo i-van ebiwe kwaye aqalisa ukuxosha isibini esinqabini esikhulu. Esi sibini sakhupha iinqwelo zithini emva kokukhwela ngamapolisa abeka iintonga zokuma.
Akulungele ukuyeka, la maqhekeza anqambileyo athatha inyawo; ngoko inenhlanhla babeya kufumana enye imoto ukuba bayibambe, bajonge kuyo kwaye baqala ukuphinda baphinde baphume ngamapolisa ngokuphanga. Kwakukho ingxaki enye enkulu. Imoto yayine-stick shift apho kungekho namnye wabaFritts owaziyo ukuqhuba. Amapolisa azungeze ngokukhawuleza imoto yokugaya kwaye abo babini bazinikela ekugqibeleni.
Mhlawumbi Unako ukuKhula isigwebo
Willie Avery. Mugshot
Yintoni oyenzayo xa umthengisi wakho wezilwanyana ekugxotha? UWillie Avery waseCorpus Christi wanquma ukuba isenzo sakhe esona sikhulu sokuthatha ukubiza 9-1-1.
Kubonakala ukuba u-Avery wanikela umfana onama-dollar ayi-10 ukuya kumthengela i-pinch of marijuana kwaye (inkumbulo enkulu) loo ndoda ayizange ibuye. Ukuziva uphangiwe, u-Avery wenza konke okuthengwa ngumthengi, wabiza u-9-1-1 ngoncedo oluphuthumayo. Xa kufika ukufika kwamapolisa, wathi kuqala wabethwa waza waphangwa, kodwa ekugqibeleni waphula waza watshela inyaniso.
Wahlawuliswa ngokufaka ingxelo engafaniyo engafanelekanga. Isifundo sifunde.
I-Arby ayikho iMood for Theft Uft
Arby Artnabbers. Mugshots
Izwi elithi, "Ukuba ayibambelelwe phantsi, umntu uza kuba," ucinga ngolu hlobo lobusela bezobugcisa kwi-restaurant ye-Arby eYohnson City, eTennessee.
Ngokomapolisa, uConnie Sumlin, 45 kunye noGail Johnson, 58, bobabini base-Erwin, eTennessee babanjwe kwaye babetyala ngokuba emva kokuba imifanekiso esecaleni kwenkhamera yokubakhombisa yabonisa abafazi beba umfanekiso oqingqiweyo wepeyari kunye nodonga oludongeni lwase-Arby lobby lobby.
Umtsalane ubonisa aba bhinqa ababengena kwi-Arby emva koko beye kwi-lobby ukuze bazuze ubugcisa. Emva koko, njengaliphi na elinye iqela le-art-nappers lingazenza, bahlukana. Omnye wabasetyhini wangena ngaphakathi kwitora yokudlela waza walawula ukutya ngelixa elinye ibhinqa lisusa umzobo.
Isicwangciso sinokusebenza xa kwakungengenxa yekhamera yokulinda kunye nomphathi wegadi yokutyelela othe wambona oko abafazi bebenokuya baza babiza ngamapolisa. Kwiintsuku ezimbalwa emva koko abafazi bachongwa, babanjwe kwaye ngamnye wahlawuliswa ngokuba u-$ 500.
Akusiyo idibaniso eyayithemba yona
Anamicka Dave. Mugshot
U-Anamicka Dave, 29, waseRoswell, iNew Mexico wayefuna ukuthenga inambuzane, kodwa ngokuqinisekileyo wayengenakufumana umthengisi. Emva koko, njengokungathi ephazamisekile, uzimisele ukuthumela isikhangiso kwi-"Casual Meetings" kwiCraigslist.
Isibhengezo sifunwe kwinqutyana, "entsha kwidolophu iyafuna ukuthenga uMaryJane."
Police Sgt eyamehlo. U-Ty Sharpe ubonise isikhangiso kwaye emva kokuqinisekisa ukuba kwakungekho umsebenzi ojikelezayo owenziwa ngesebe lakhe, wangena kwisenzo.
Abagwenxa abasebenza njengabathengisi bombumbi baceba ukudibana noDave baze bambambe ngokukhawuleza xa ebonisa.
Ngaba Ungathanda Ubisi kunye neeKhukhi, Nawe?
Jesse Dimmick. Mugshot
Ngomgudu wokugwema ukuboshwa emva kokubanjelwa ngokubulala ngo-2009, uJesse Dimmick waqhubeka ehamba namapolisa alandelayo. Wagqiba ukuphazamisa iimoto ezimbini ezebiwe waza wagqiba ekubeni athathe abantu abasandulandana nabo uYredde noLindsay Rowley.
I-Rowleys yayiphatha i-Dimmick njengoko yayingayiphi na indwendwe, imnika i-refreshment kunye nemithwalo kunye nengubo kwaye iqela lihleli kwaye libukela i-movie.
Xa uDimmick wagxininisa ukulala eRowleys wasinda waza wabiza amapolisa. Wabanjwa, kodwa kungekudala ngaphambi kokuba kuqhutywe ibhotile kwaye wadutshulwa.
I-Rowleys ke yagqiba ukutshutshisa uDimmick i-$ 75,000 ngenxa yokuxinzezeleka okubangelwa yi-home invasion kwaye ibanjwe, kubanjwe.
Ngokuphindaphindiweyo uDimmick, ocinga ukuba wayenomzuzwana wangempela "gotcha", wagqiba ukuphikisana neRowleys ngeedola ezingama-235,000 ngenxa yokuphula isivumelwano kunye nokuncedisa ukuhlawula iindleko zonyango emva kokudutshulwa kwipropati yawo.
Wabhala wathi, "Mna, ummangalelwa, wabuza iRowleys ukuba ndifihle ngenxa yokuba ndiyesaba ubomi bam. Ndamnika iRowleys imali engabonakaliyo abavumelene ngayo, ngoko ke ifuna isivumelwano somlomo esisemthethweni."
Ngokumangalisayo iRowleys kwafuneka iphendule kumgwebi ukuze iqhutywe ngumgwebo.
Cococa kwi-Aiseth ye-Meth!
Alisha Halfmoon. Mugshot
U-Elizabeth Alisha Greta Halfmoon, 45, owaziwa nangokuthi ngu-Alisha Halfmoon, utshutshiswa ukungena kwi-Walmart yaseTulsa ukupheka i-meth.
Ngokutsho kwamapolisa aseTulsa, u-Walmart ukhuseleko lwabaqhagamshelana nabo ngenxa yokuba uHalmoon, owayesevenkile ezintandathu iiyure, wayelumkrokre.
Igosa likaDavid Shelby lathi xa efika eHalfmoon ngaphakathi kwevenkile wayeseqede ukudibanisa i-sulfuric acid kunye ne-starter fluid engaba ngumxube omkhulu.
"Xa abacimi bomlilo babesemgangathweni wazenza iingxelo kubo oko yinto ayenzayo, wayezama ukufumana ezi makhemikhali kwaye wayesebenzisa ukuzama ukwenza i-meth. Nangona kunjalo, wathi akayilunganga kakuhle, "kusho uGosa uShelby.
Omnye wamagosa esecaleni lafumana iikhemikhali ezitshisa ngelixa elahla umxube emva kokuba atshise ngebhotile kunye nangeiglavu zakhe.
Uyazi ukuba Usuku olubi Xa ...
UTimoti Clark. Mugshot
Abagcini bezitolo zihlala bekhangele ithuba lokuba.
Kubonakala ukuba uTimothy Randall Clark waseMaldan wacinga ukuba ixesha elifanelekileyo lokuba kwi-Walmart ngexesha le "Shop with A Cop" isiganeko sothando sinobanjwe ngamagosa amapolisa angama-50.
Ukhuseleko lweWalmart lubanjelwe uClark ezama ukufihla imidlalo yevidiyo kunye nezixhobo kwi shirt yakhe kwaye wabiza ngamapolisa - onke ama-50 kubo.
Amapolisa athi uClark uhlawuliswe ngokubanjwa kweeR6 6,04 ze-Play Station kunye ne-Xbox imidlalo, abalawuli ababini, kunye nezinye izesekeli zemidlalo yevidiyo ezixabiswa kwi-$ 635.04.
Izigwenxa Zomntwana Umbulali Angela McAnulty
U-Manson Umbulali Wentsapho U-Donald "Ulungelelwaniso" U-Shea Uphindezela
IziLyala kunye novavanyo lukaLyle noErik Menendez
UCharles Manson Usapho
I-Hydrogen Bond Definition kunye nemizekelo
IMenai Suspension Bridge
22 Iingcamango zokuphepheka xa udweba
Iingqimba zamanzi zelanga: Ziziphi iinzuzo?
I-Emulsifier Inkcazelo - Agent Emulsifying
UJoyce Carol Oates ekubhaliseni: 'Musa ukuyeka'
I-Amateur yoluntu yoLuntu
Hunahpu kunye ne-Xbalanque - iiMaya Hero Twins
Yintoni i-General Semantics?
10 Amanqaku Ngombulali weeWhale okanye i-Orcas
Imfazwe Yehlabathi I: Ingqwalasela
UCorny Dad Jokes Sifumene Ukuba Sivumele Senze Senzeke
Biography yeCary Grant
INewts kunye neSalamanders